Abaalmarinta biladda suxufinimada iyo cidda ku guuleeysatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abaalmarinta biladda suxufinimada iyo cidda ku guuleeysatay
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 11.04
Abaal-marinta ballaaran ee suxufiga ku guuleeysta inuu daaha ka qaado dhacdo qarsooneyd ayey sannadka ku guuleeysteen labada suxufi ee Bo Göran Bodin iyo Daniel Öhman oo labaduba ka howl-galaan laanta wararka Ekot ee idaacadda Iswiidhen. Iyagoona ku muteeystey abaal-marintaa daah-furkii ay ku sameeyeen wada-hadalladii dhex-marey dawladaha Iswiidhen iyo Sacuudiga ee dalkani gacanta uga geeysan lahaa in dalka Sacuudigu yeesho warshad hubka sameeysa.
Halka dhanka kale lix suxufi ee ka howl-gala war-geeyska SvD "Svenska Dagbladet" ku hantiyeen abaal-marinta, cidda bilowday hannaan cusub. Iyadoo la geliyey qariidad bogga internet-ka si bulshadu ey ugu muujiyaan is-barbar-dhig heerka ribada ee deeymaha guryaha.
Biladda abaal-marinta ee sheekeeyaha sannadka ayay ku guuleeysatay Carina Bergfeldt oo ka howl-gasha war-geeyska aftonbladet, qoraaladdeedii la xiriirey xasuuqii ka dhacay jasiiradda Utöya ee Oslo caasimadda dalka Noorway.
Inger Atterstam ayaa sidoo kale ku guuleeysatay biladda qoraalka caafimaadka Lukas Bonniers ee suxufiyiinta.